कला / साहित्य ब्लग
जनवरीमा तेलअभिव सधैंजस्तो आज पनि चिसो थियो । आफ्ना हर्क्युलिन छातीमा पक्का, दरिला र लाम्चा सडक बोकेर त्यहीँ नै वर्षौंदेखि अचल थियो । रातमा बाटोछेउका ल्याम्पपोस्ट गर्धन झुकाएर बलेका आँखाले केही खोज्दै थिए ।
‘आई नो द्याट ड्रेस इज कर्मा, पर्फ्युम रिग्रेट,’ चार्ली पुथको आवाजले मेरो मोबाइलमा घण्टी हान्यो, केशव रहेछ ।
‘कता हो आज हाम्रो मिलन ?’ हेल्लो भन्न नपाउँदै उसले सोधिहाल्यो ।
‘त्यहीँ त होला नि अड्डातिरै (सधैं भेट्ने ठाउँ) !’ मैले जवाफ दिएँ ।
‘हो, त्यहीँ जाऔं, मलाई फाप्छ त्यहाँ,’ उत्साहित हुँदै उसले समर्थन गर्यो ।
‘तँलाई त जहाँ पनि फाप्छ नि ! छम्मा भए नर्क पनि स्वर्ग,’ मैले पनि मौकामा दुई शब्द छाडिहालें ।
उताबाट ‘हा.. हा.. हा’ गुन्जिरह्यो । म पनि एकपटक लामो हाँसो हासें ।
‘हाम्लाई पनि सिका न !’ मैले मजाक गर्दै भनें ।
‘चालिस सेकेल पर आवर लाग्छ । हुन्छ ?’ केटाले किनेर उपभोग गर्ने आइडिया बतायो । ‘चुप लाग मुला । मलाई त्यसरी सिक्नु छैन,’ मैले इन्कार गरिदिएँ ।
‘के बाबाजी पल्टिन खोजेको नि,’ उसले भन्यो, ‘स्याललाई अंगुर अमिलो भनेको यही हो । तँ मुलाले जिन्दगीको मजा बुझेकै छैनस् ।’ मलाई जीवनको पाठसमेत पढाउन भ्यायो ।
‘पख्, म सरोज र राजेशलाई पनि फोन गर्छु । सी यू देअर,’ उसले फोन राख्यो ।
बरु बाआमासँग बोलेको कुरा पूरा हुँदैन, साथीले भनेको कुरा दुईपटक भन्नुपर्दैन । भावनाले जोडिएको सम्बन्ध त्यसैले मजबुद हुन्छ ।
आज पब जाने योजना बन्यो । त्यसै पनि धेरै जनाले शुक्रबारलाई ह्याप्पी फ्राइडेका रूपमा मनाउँछन् । हुन पनि यही एक रात हो हप्ताभरिमा, हामी मान्छे भएर बाँच्ने । विदेशमा त यसको महत्त्व अझै धेरै हुन्छ । हप्ताभरि फोन गर्नसमेत अलर्ट भएर काम गर्ने, पढ्ने । मोज गर्ने समय कहाँ हुन्छ र ? आगामी शुक्रबार के गरौं र कसो गरौं हुँदै बित्छ ।
फेरि इजरायलमा शुक्रबार साँझ ५ बजेबाट शनिबार साँझ सवा ५ बजेसम्म सब्बात अर्थात् बिदा हुन्छ । यो अवधिमा यहुदीहरु काम गर्दैनन् र गराउँदैनन् पनि । यही हो, आराम र मस्तीका रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने समय । आजचाहिँ बेलैमा मौकामा चौका हान्ने योजना बन्यो ।
बियर, वाइन, पुल, डिस्को, आजको सेड्युल । म नुहाएर हतार–हतार आफ्नो बाटो लागें । त्यहाँ पुग्दा केटाहरू भेला भइसकेका थिए । यी केटाहरुमा ‘तर’ अर्थात् ‘तरुनी’ र ‘रक्सी’ले जीवनमा कहीँ नभएको जाँगर पैदा गराउँछ । हुन त म पनि त्यही केटामध्ये एक हुँ । आ, जे होस्, ‘के छ केटा हो ?’ सबैले हात मिलायौं ।
‘आज के छ नेससको कार्यक्रम ?’ राजेशले सांकेतिक शब्द प्रयोग गर्यो । केटाहरुले जिस्कँदै ‘नेपाल सहवास समाज’ संस्था खोलेर ख्याति कमाउने कुरा गर्थे । यसैको सटफर्मलाई हामीले सांकेतिक बनाएका थियौं ।
‘भन है राज, कस्तो स्याउ खाने हो ? लेकको कि बेंसीको, जम्मु काश्मीर कि हुम्ला, गोरखाको ?’ यति सोधेर ऊ गलल हाँस्यो । मैले पनि फिस्सा हाँसेर केटाहरुको भनाइबाट थोरै मजा लिएँ ।
‘हेर्दै जाओ,’ म हाँस्दै अघि बढें ।
एक–एक वटा क्यान बियर हातमा लिएर हामी हुटर्स बारको पुल हाउसतिर छिर्यौं । पुल हाउसतिर त्यति भीड थिएन । हामी चारजना साथी पुल खेल्दै थियौं । हो, त्यतिखेर नै त हो नि मैले हिभालाई देखेको । टाढाबाट हेर्दा त्यति राम्री त होइन । तर, एक्ली केटीलाई कुनामा बसेर पिइराखेको दृश्यले मलाई तान्यो, ब्याड लक भएका बेला पुलको प्वालले क्युबल तानेजस्तो ।
हिभालाई देखेपछि वाइन बियरले छुँदै नछोई आँखाहरुमा नशा भरिएजस्तो महसुस हुन थाल्यो । उनलाई तलदेखि माथिसम्मै हेरें । पुरुष अहं साचेर बसेका मेरा पापी आँखा उनको शारीरिक भूगोलमा निर्बाध विचलन गर्न थाले । म पुलमै टिकिरहन सकिनँ । मेरो आदतबाट म जति भाग्न खोजे पनि असफल थिएँ । हेर्दै पिउँदा नशा निकै चढिसकेको थियो त्यसैले त चार बल बाँकी छँदै ब्ल्याक बललाई पुस मारिरहेको थिएँ । म हिभाको नजिकै गएँ र अर्को क्यान बियर अर्डर गरें ।
‘एक्लै हो ?’ संवाद त मैले सुरु गरें । तर, उसले खासै वास्ता गरिनँ । अरु बेला भए मलाई पनि बाल हुन्थ्यो र ? नबोल्ने र भाउ खानेलाई त म झन् एक ग्राम पनि भाउ नदिने मान्छे । भाउ नखाई नछाड्ने केटी पाइँदैन भने बरु ब्रह्मचारी बसौंला । तर, क्यानले मलाई उनको रूपको फ्यान बनाइसकेको थियो । त्यहाँ बीचमा भाउ भन्ने कुरा अघि नै आउट भइसकेको हुँदो हो । अब मैले त्यहाँ आफूलाई कुनै मूल्यमा प्रस्तुत गर्नेवाला थिइनँ ।
आफ्नै धुनमा पिइरहेकी उसलाई नजिकैबाट नियाल्ने मौका पाएँ । नजिकबाट भने अलि राम्री देखिई । गलासम्मको खैरो कपाल, चुच्चो नाक, गोरो तर छ्याके–छ्याके परेको छाला, उमेर भने बीस–बाइस हुँदी हो । मलाई सबैभन्दा उसको ओठले लोभ्याएको थियो । टिपिक्क परेको, रातो गुलाबको पत्रजस्तो । ह्वीस्कीको रसमा लतपतिएर कति रसिलो भएको थियो । ‘मेरो आजको स्याउ,’ मेरो मनमा कल्पनाको लड्डु फुट्यो, मनले त रसस्वादन गरिसक्यो । तर, अझै म तृप्त हुन सकेको थिइनँ । मनमनै दंगिएँ– मेरो आजको समय बर्बाद हुनेवाला छैन ।
आल्मोनियमको रेलिङलाई एउटा हातले समातेकी थिई, अर्को हातमा ह्वीस्कीको पातलो गिलास । मैले पनि दायाँबाट त्यही रेलिङलाई समाएँ । ऊतिर मेरो नजर बिछिएका थिए । तलदेखि माथिसम्मै नियालें । मनमनै त्यो युद्धसंग्राम कल्पना गरें । तर, विजय र पराजयको निचोड भने निकाल्न सकिनँ । त्यहाँ के विजय के पराजय ? मैले जितें, उसले जित्ने हो, हारें सँगै हार्ने हो । मनमनै मुस्कुराएँ । ओठसम्म आइसकेको मुस्कानलाई ओठमै गाभिदिएँ । अहिले हाँसें भने कसैले मलाई पागल नभनून् ।
केटाहरुले हातमा पुलको स्टिक समाए पनि ध्यानजति सबै मतिरै खन्याएका हुँदा हुन् । जसरी छरिएका पुलका बलले केटाहरुको स्टिक हेरिरहेका थिए । सरोजले आफ्नो हाःफ बललाई पावर सट हान्यो । तर, क्यु बल चिप्लिएर ब्ल्याकमा गएर ठोक्कियो र ब्ल्याक बल मिड पकेटमा छिर्यो । राजेश हाँस्यो ।
‘हरेक गेममा रिस्क हुन्छ । रिस्क बेगरको गेम केही छ त ?’ गेम हारेपछि सरोजले यसो भनेर चित्त बुझायो ।
मैले सोचें, ‘हो त म पनि गेम नै खेल्न खोजिरहेको छु । त्यसका लागि रिस्क त लिनैपर्छ नि !’
‘हे’ मैले उतापट्टि आफूलाई सोझ्याएँ ।
उसले मतिर हेरी र ‘हे’ रिप्लाई गरी । आमनेसामने भएपछि म हल्का नर्भस भए । तर, अनुभव थियो सम्हालिने ।
‘तेरो त आज म,’ मैले नेपालीमा आफ्नो ओठ चलाएँ ।
‘सरी ?’ उसले कन्फरमेसन खोजी । ऊ जो नेपाली बुझ्दिन थिई । बुझ्ने भए म पनि त्यसरी भन्दिनथें । घरी घरी के मुड चल्छ ? आफूलाई सम्हालें । अनि भनिदिएँ, ‘तिमी राम्री छ्यौ । म तिमीसँग बसेर केही गफ गर्न चाहन्छु ।’
‘अवश्य,’ उसले स्विकारी ।
सिजोनपट्टिको मेचमा गएर बस्यौं, जहाँबाट समुद्रको बीचबीचमा बलिरहेका बत्ती झिलमिलाइरहेको प्रस्ट देखिन्थे, सायद हाम्रो शुक्रबार ह्याप्पी बनाउन ।
टेबुलमा राखिएको खैरो ब्यागबाट उसले रोयल ब्रान्डको सिगरेट निकालेर सल्काई ।
‘तिमी के चाहन्छौ ?’ उसले सिधै सोधी ।
मैले भने, ‘तिमी ।’
‘तिमीलाई थाहा छ ? हरेक कुराको मूल्य हुन्छ । आफ्ना चाहना परिपूर्ति गर्न केही कुरा समर्पण गर्नुपर्छ,’ अब चाहिँ उसले भाउ खोजी ।
मैले हतारिएर सोधें, ‘अवश्य, त्यो के हो ?’
‘मार्केटमा कुनै कुरा मन परे तिमी के गर्छौं ?’ उसले फेरि सोधी ।
‘किन्छु,’ मैले सोझो जवाफ फर्काएँ ।
‘मूल्य सोध्दैनौं ?’ आखिर कुरा फेरि मूल्यमै आयो । सायद उसको मूल्य म आफैंले प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो ।
‘म कुनै पनि चिजलाई मूल्य चुकाउनुअघि त्यसका फाइदा र सुविधाबारे जान्ने गर्छु,’ मैले बार्गेनिङवाला जवाफ दिएँ ।
‘धेरै राम्रो,’ फेरि सोधी, ‘बिना फाइदा र सुविधाको वस्तु के काम ? तर, क्रेताले त्यो वस्तुलाई कति जतनले प्रयोग गर्छ, कति टिकाउँछ, त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तिमी के भन्छौं ?’। मानौं, हामी प्रोफेसनल विजनेस डिल गर्दै छौं । ऊ त प्रोफेसनल नै थिई क्यारे, म त थिइनँ नि !
‘एकपटक वस्तु किनेर प्रयोग गर्न त पाऊँ, त्यसपछि थाहा हुन्छ, पुनः प्रयोग गर्ने, सजाएर राख्ने वा फालिदिने,’ मैले अलि बुझ्ने गरी उत्तर फर्काएँ ।
‘५ हन्ड्रेड सेकेल विदाउट अपार्टमेन्ट,’ बहुप्रतिक्षित उत्तर मिल्यो । मभन्दा त्यो बियर बढी उटपट्याङ थियो । म प्रश्न र जिज्ञासा रोक्न खोज्छु, ऊ धकेलिरहन्छ । आखिर बियर आफैंले खोजेर तयार गर्यो आजको सितन ।
केशवले फसाइहाल्यो नि ! आवरको होइन, नाइट क्विनले त पूरा रातको कुरा गरी । के गरौं ? नखाऊँ भने दिनभरको सिकार खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार । केटाहरुलाई छाडेर जाऊँ भने भोलिदेखि मलाई गाली गर्नेबाहेक यिनीहरुले अरु कामै पाउँदैनन् । नजाऊँ भने बियरले सितन मागेर हैरान छ ।
‘प्लिज लेट मि थिंक,’ हिभालाई कुराएर म केटाहरुतिर गएँ । पुल हाउसनजिकै पुगेको थिएँ, मलाई कसैले बोलाएजस्तो लाग्यो । टक्क रोकिएँ, ध्यान दिएर सुनें । ‘एक्सक्युज मी, क्यान यू सो यर पासपोर्ट प्लिज,’ कसैले मसँग पासपोर्ट मागिरहेको थियो ।
मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनँ । म अघि बढिरहें । अचानक कसैले मेरो कुममा हात राखेर हल्लायो र फेरि बोलायो, ‘हेल्लो मिस्टर ।’
म झस्किएँ । प्रहरी रहेछ । हतार–हतार झोलाबाट पासपोर्ट निकालेर देखाएँ । ‘थ्यांक यू एन्ड सरी फर डिस्टर्ब,’ उनीहरु हिँडे ।
म पुल हाउसतिर लम्किन खोज्दै थिएँ, अगाडि ठोक्किएँ । नियालेर हेरें, गाडीको सिट रहेछ । ओ गड ! म त बसमा यात्रारत रहेछु । साथीहरु, बियर, पुल, हिभा सबै सपना थियो ? कति आनन्ददायी सपना देखिरहेको थिएँ । म हैरान भएँ । प्रहरीलाई पनि यतिबेलै मुन्टिनुपर्ने ? मनमनै मुरमुरिएँ ।
अघिल्लो दिन झापाकी प्रिया सुवेदीको बर्थ डे थियो । राति अबेरसम्म नाचगान गरियो । अर्कोतिर पढाइ र कामको थकानले म कति बेला निदाएँ, पत्तै पाइनँ । जे होस्, मेरो लागि त्यो सपना विशेष थियो ।
मेरो छेउमा जर्मन साथी फ्रेडरिच बसेको थियो । मभित्रको उकुसमुकुस सायद उसले महसुस गर्यो ।
‘के भयो ?’ उसले सोध्यो ।
‘केही होइन,’ मैले जवाफ दिएँ ।
‘तिमीलाई म अन्कम्फर्ट देखिरहेको छु, के भयो भन मन हल्का हुन्छ,’ उसले कर गर्यो ।
मैले सपनाबारे भनें ।
‘सपना देख्यौ, अब भुलिदेऊ, त्यसलाई सम्झेर उत्साहित हुनु वा निराश हुनुको कुनै औचित्य हुँदैन,’ उसले सान्त्वना दियो ।
‘फ्रेडरिच, मलाई सपनाले कुतकुत्याएको बिलकुल होइन,’ मैले भनें, ‘मलाई त त्यो नामले चलाइरहेको छ, जुन नामसँग मेरो गहिरो नाता छ ।’ यस्तो उत्तर पाएपछि ऊ चुप लागेर बस्नेवाला थिएन । सोधिहाल्यो, ‘तेलअभिव आउन अझै ४० किलोमिटर छ । कृपया, मलाई त्यो नामसँगको नाताबारे प्रस्ट्याऊ ।’
भन्दिनँ भने पनि उसले अब मलाई धर दिनेवाला छैन ।
अमनुमस्थित मिरियम सोहम इजरायलको एउटा चर्चित थोक उत्पादक कम्पनी हो । उक्त कम्पनीमा म नेपाली विद्यार्थीहरुको टिम लिडर थिएँ । त्यही कम्पनीमा अरबीहरुको सुपरभाइजरका रुपमा कार्यरत थिइन्, डच गर्ल हिभा सुफानी । पहिलो दिन उनले नै मलाई आँप प्याकिङ गर्न सिकाएकी थिइन् । कलेजको फी तिर्न हामी त्यहाँ काम गथ्र्यौं । सुरुमा अलि ढंग नपुग्दा हिभाले मलाई सिकाउँथिन् र मैले अरुलाई ।
निकै सुन्दर थिइन् हिभा । हाइटमा धेरै अग्ली नभए पनि उनको शारीरिक बनोट निकै आकर्षक थियो, टपक्क मिलेको सबैतिर । उनको पहिरन पनि शरीरमा मिल्ने र सुहाउँदो हुन्थ्यो । गाजलले पोतिएका ठूला–ठूला आँखा, हल्का लिपिस्टिक पोतिएको गुलाबी ओठ । नाक हल्का चुच्चो चुच्चो थियो । कान, कन्सिरीका छेउ र गालामा हल्का कैलो कैलो रौं, हाम्रोतिरका बाहुनीजस्तो । गोरी थिइन् उनी । निधारमा सानो आकारको कालो टीका लगाउने गर्थिन् । गोरो चेहेरामा त्यो टीकाले उनी परीझंै लाग्थ्यो ।
बोल्दा उनी सभ्यताको विशेष हेक्का राख्थिन् । कसैलाई बिजाएर भनेको मैले कहिल्यै सुनिनँ । बरु कसैले बिजाएर भनिहाल्यो भने चुप लागेर हिँड्थिन् । सायद घरमा गएर रुन्थिन् कि ! नभए पनि किन मैले प्रतिवाद गरिनँ भनेर पक्कै धिक्कारचाहिँ मान्थिन् । मलाई काम सिकाए पनि उनीसँग मेरो विशेष हिमचिम भने थिएन ।
हामी बोल्न थालेको त्यही दिनबाट हो, जुन दिन मैले उनको पोसाक र सुन्दरताको एउटै शब्दमा तारिफ गरिदिएँ दिल खोलेर । साथीहरु घर गइसकेका थिए । रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने भएकाले ६ बजे साँझसम्म म कम्पनीमै थिएँ । मलाई थाईहरुको सुपरभाइजरले पुर्याइदिनेवाला थियो ।
मबाट पास भएर उनी अफिसतिर जाँदै थिइन् । हुन त मैले उनलाई दिउँसो नै देखिसकेको थिएँ । तर, नजिक आएपछि चुप लागेर बस्नै सकिनँ । हुन पनि गोरी मान्छे कालो पेन्ट र त्यस्तै टिसर्टमा सारै क्युट देखिएकी थिइन् । ‘वाह !’ उनले मतिर हेरेका बेला मैले प्रतिक्रिया दिएँ ।
उनी मन्द मुस्कुराइन्, टक्क रोकिइन् ।
‘के भयो ?’ सायद आफ्नो प्रशंसा अझै गरिदेओस् भन्ने चाहना उनमा थियो ।
‘तिमी साँच्चै राम्री छ्यौ,’ मैले उनको चाहनाअनुसार थपिदिएँ प्रशंसाका शब्द ।
‘धन्यवाद ।’ हल्का लजाएकी उनी अघि बढिन् । उनी अघि बढ्दा मैले उनको ब्याक हेरें । वाह ! साँच्चै कमाल । त्यो दिन हामी आ–आफ्नो अपार्टतिर लाग्यौं ।
अपार्ट पुगेपछि मैले उनी सम्झें । कति सुन्दर, सभ्य केटी । म मज्जासँग लोभिएको थिएँ उनको रूप र व्यवहारबाट । म उनलाई मन पराउन थालेको थिएँ । शनिबार बिदा बस्दा पनि उनकै झझल्को आइरहन्थ्यो । मलाई कुनै पनि सुन्दर केटीको रूपले त्यति तान्न सकेको थिएन, जति हिभाले तानेकी थिइन् । उनको अगाडि मलाई अरु कुनै युवती आँखा लाग्न छाडेको थियो ।
तर, उनलाई प्रेमजालमा पार्न त्यति सजिलो कहाँ थियो र ! हिभासँग चिनजान भएको केही दिनपछि क्यान्टिनमा सहकर्मीबीच ख्यालठट्टा भइरहेको थियो । मित्र मनोजले केटी पट्याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
‘केटी कागज हो र पट्याउन ?’ अर्की साथी निर्मलाले च्यालेन्ज गरी, ‘सोझीसाझी देखेपछि जसले पनि पट्याउँछ, अलि क्युट र बाठी केटी पट्याउने पो स्मार्ट हो ।’
उसले मतिर हेरी । किनकि, केही समयअगाडि उसले फेसबुकमा फोटो देखाउँदै प्रेममा पार्न असम्भव भनेकी केटी मेरो पूर्वप्रेमिका भएको कुरा थाहा पाएकी थिई ।
‘दिमाग र भाग्य भयो भने गारो छैन,’ मैले भनें । त्यही समय हिभा हाम्रैसामु क्यान्टिनबाट बाहिर निस्कँदै थिइन् । औंलाले हिभालाई देखाउँदै निर्मलाले भनी, ‘ल सक्छौं भने हिभालाई पट्याएर देखाऊ त !’
त्यति मात्रै हो र ? उसले हिभालाई बोलाएर पनि यो कुरा सुनाइदिई । अब हिभालाई मैले मन पराउँछु भने पनि उनले पत्याउनेवाला थिइनन् ।
त्यो धेरै अगाडिको कुरा थियो । अब म बदलिएको छु, यो कुरा हिभालाई भन्नु थियो । तर, कसरी ? कुनै उपाय लगाए पनि उनमा संशय रहन्थ्यो नै ।
एक दिन क्यान्टिनको फस्ट फ्लोरमा कफी पिउँदै एक्लै बसेकी थिई ।
‘आज बादल लागेको छ । तर, पानीचाहिँ पर्दैन होला,’ बोल्ने बाहानासहित म उनको छेउमा गएर बसें ।
‘पानी त पर्छ, पर्नै लागिसक्यो,’ उनले मेरो कुरामा असहमति जनाइन् ।
‘होइन, कालोमैलो भएको निकै बेर भयो, पर्ने भए अघि पथ्र्यो । पानी अब पर्दैन, हेर्दै जाऊ एकछिनमा घाम लाग्छ,’ लजिकल नभए पनि मैले फोरकास्ट अनुमान गरें ।
उनले मेरो अनुमान पूरा नहुने दाबी गरिन् । मैले च्यालेन्ज गरें । उनले स्वीकार गरिन् । ‘जित्यौ भने तिमीले जे भन्छौ, म त्यही मान्छु, मैले जितें भने मैले जे भन्छु, त्यो मान्नुपर्छ ।’ मेरो च्यालेन्ज ।
‘डन’ उनले स्विकारिन् । संयोग मान्नुपर्छ, त्यसको केही समयपछि टन्टलापुर घाम लाग्यो । तर, उनी त्यतिबेला घर गइसकेकी थिइन् ।
बेटिङ जिते पनि मैले उनीसामु आफ्ना कुनै चाहना प्रकट गरिनँ । केही दिनपछि बरु उनले नै भनिन्, ‘तिमीले बेटिङ जितेका थियौ, के भन्छौ ?’
मैले भुलेजस्तो गरी भनें, ‘ए, हो ! म भोलि भन्छु ।’
भोलिपल्ट उनी अरु बेलाभन्दा अझै राम्री भएर आएकी थिइन् । सायद फेस गर्ने विचारमा । मैले उनीसामु गएर भनें, ‘म तिमीसँग बाहिर गएर एक कफ कफी खान चाहन्छु ।’
‘हा हा कफी खान किन बाहिर जानुपर्यो, यही खाऊँ न क्यान्टिनमा, के भन्छौ ?’ हाँस्दै उनले सोधिन् ।
म चुप लागें । पछि उनले स्वीकार गरिन् र बाहिर एउटा क्याफेमा गएर हामीले कफी माग्यौं । उनीसँग कम्पनीबाहिर वान एन्ड वान बसेको पहिलो दिन थियो त्यो । हामीबीच धेरै कुरा भएन । किनकि, उनी लजालु स्वाभावकी थिइन्, मैले जति बोले पनि उनले मुन्टो हल्लाउनेभन्दा अरू प्रतिक्रिया जनाइरहेकी थिइनन् । मेघ गर्जनको आवाज आयो । तर, घाम लागिरहेको थियो ।
‘पानी पर्ने भो, हामी उठौं,’ मैले भनेँ ।
‘घाम लागिरहेको छ, कसरी पर्छ पानी ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
‘हेर्दै जाऊ,’ मैले भनें, ‘कि बेटिङ राख्ने हो ?’ मैले हाँस्दै सोधें ।
‘तिमी चाहन्छौं भने राख्ने,’ उनले जवाफ दिइन् ।
‘ल पानी पर्यो भने तिमीलाई म लामो दूरीको यात्रामा डेट लैजान्छु । परेन भने तिमीले जे भन्छौं, त्यही मान्छु ।’ यसअघिको सर्तलाई थोरै संशोधन गरें । उनले ‘हुन्छ’ भनिन् । हामी तल झर्दाझर्दै घाम लुकिसकेको थियो भने आकाशमा कालो बादल मडारिँदै थियो । त्यो हेरेर हिभा मुस्कुराउँदै मलाई हेर्दै थिइन् । हामी कम्पनी पुग्दा नपुग्दै पानी पर्यो ।
म हासें, उनी लजाइन् हल्का ।
बाजीबारे बहस गर्न अब हामी भेट गरिरहनुपर्ने थिएन । मैले उनको मोबाइल नम्बर मागिसकेको थिएँ ।
‘तिम्रो नम्बर कति हो ? मलाई देऊ त । म तिमीलाई २ बजे राति फोन गर्छु,’ कफी खाँदै मैले भनें ।
उनी आश्चर्यचकित भइन् र सोधिहालिन्, ‘ओ गड ! २ बजे राति नै किन ?’ मैले मजाक गरेको बताएँ । अब सायद उनले मलाई नम्बर दिएको कुरा भुल्ने छैनन्, म दंगिएँ ।
त्यो दिनदेखि हामी राति पनि कुरा गर्न थाल्यौँ । म टाढा डेट जान सर्तमा विजयी भइसकेको थिएँ । केही समयपछि हामी डेट गयौं । हामीबीचको सम्बन्ध झाँगिँदै गयो । हिभा मेरो जीवनको पहिलो युवती बन्न पुगिन्, जसलाई म हृदयदेखि नै चाहन्थें र आफूलाई भन्दा बढी माया गर्थें ।
उनी काममा नआउँदा म निराश हुन्थें । उनको एक दिन कल नआउँदा हतास हुन्थें । म यति अघि बढिसकेको थिएँ कि मैले भूगोल, संस्कृति र परिस्थितिलाई भुलिसकेको थिएँ । म पहिलोपटक कुनै केटीसँग यति खुसी छु । यो मेरो जीवनको अविस्मरणीय सम्बन्ध हो ।
सामान्य कुरामा एक दिन हिभासँग मेरो झगडा पर्यो । हामी एक हप्तासम्म बोलेनौं । एक हप्तापछि उनले नै बोलाइन् । केही समयपछि फेरि त्यस्तै ठ्याकठुक्क पर्यो । म बोल्न छाडें । यसपटक पनि उनले नै बोलाइन् । सायद म अलि बढी पुलपुलिएको थिएँ ।
एक दिन उनले मसँग सोधिन्, ‘तिमी किन यस्तो छौ, आफैं झगडा गर्छौ अनि आफैं बोल्दैनौ ?’
मैले जवाफ दिएँ, ‘मेरो सेल्फ रेस्पेक्टका कारण ।’ सायद दिन नहुने उत्तर दिएँ मैले ।
‘ए भनेपछि मेरो चाहिँ कुनै सेल्फ रेस्पेक्ट छैन,’ उनले प्रतिवाद गरिन्, ‘म त्यस्तो चिपजस्तो लाग्छ ?’ उनी त्यहाँबाट हिँडिन् ।
करिब एक महिना हाम्रो बोलचाल बन्द भयो । हामी इमोका कारण बोल्न बाध्य हुन्थ्यौं । जे भए पनि माया गरेको मान्छे, लास्ट सिन त चेक गरिन्छ नै । प्रायः इमोमार्फत कुराकानी हुन्थ्यो । याद आउँदा पहिले भएका कुराकानी हेरिन्थ्यो । फेरि इमोमा जता दाबिए पनि कल गइहाल्ने । कहिले उनी झुक्किने, कहिले म । यसरी हामी नजिकिन्थ्यौं ।
एक दिन मैले उनीसँग जिस्कँदै विवाहको प्रस्ताव गरें ।
‘के तिमी मसँग विवाह गर्छौ ?’ मैले सोधें ।
‘पागल भयौ ? अहिले विवाह ?’ उनको यस्तो जवाफ आएपछि उनको कुरा बुझ्न थप बोलें, ‘समस्या के छ, तिमी आँट अरु म पुर्याउँछु ।’
उनले आफू अलग समुदाय र भूगोलको भएकाले विवाह गर्न नसक्ने जवाफ दिइन् । तर, जीवनभर माया गरिरहने वाचा गरिन् ।
मैले उनको कुरा बुझिनँ । विवाह नगरौंभन्दा मन कताकता दुख्यो । जिन्दगीमा पहिलो प्रेम, त्यो पनि अधुरो । म घरतिर लागें । त्यो दिन साँझ कुराकानी भएन । न उनले गरिन्, न मैले । भोलिपल्ट उनले इमो एप्स मोबाइलबाट डिलिट गरिछन् । मैले इमोमा कल गर्दा नलागेपछि मोबाइलमा गरेर यसबारे सोधेको थिएँ । उनले मोबाइलमा स्टोरेज फुल भएकाले डिलिट गरेको कुरा सुनाइन् । हामीलाई क्लोज बनाउने इमो नै डिलिट गरेपछि चाहिँ साँच्चै मन दुख्यो ।
मानौं, मेरो प्रेमचाहिँ त्यो इमोसँग थियो । त्यसपछि मैले उनीसँग कुरा गर्न छाडिदिएँ । केही समय उनले मसँग कुरा गर्ने प्रयास गरिन् । तर, मेरो इगो नसक्नुकै छ । त्यस्तो माया गरेकी हिभालाई मैले मनबाट निकाल्न नसके पनि दबाएर राखें । तर, मेरो मनमा उनीप्रतिको माया अपरम्पार नै छ । सधैं माया गर्छु, म उनलाई । सायदै त्यसैले सपनामा पनि उनको नाम आइरहन्छ, मलाई झस्काउन । यति भन्दै गर्दा मेरा आँखा आँसुले भरिँदै आए ।
‘अनि अहिले हिभा कहाँ छिन् त ?’ फ्रेडरिचले प्रश्न गर्यो ।
‘तेलअभिवमै छिन्, हामी बस्ने अपार्ट नजिकै,’ मैले जवाफ दिएँ ।
‘के उसले विवाह गरी,’ फेरि उसले प्रश्न गर्यो ।
मैले भनें, ‘छैन’ ।
‘कुनै बाइफ्रेन्ड ?’ अर्को प्रश्न गर्यो ।
‘सायद तर म कन्फर्म छैन,’ मैले जवाफ दिएँ ।
‘मलाई एकपटक भेट गराऊ,’ फ्रेडरिचले कठिन माग राख्यो, ‘आखिर हामी त्यहीँ जाँदै छौं, मलाई एकपटक भेटेर कुरा गर्ने मौका मिलाउदेऊ ।’
‘कृपया !’ मैले आफू जान नचाहने कुरा जाहेर गरें । सायद उसले कुनै फिल्म कल्पना गर्यो र हिरो हिरोइनलाई मिलाउने प्रण पनि ।
‘हेर, फ्रेडरिच ! म यहाँ स्टेज कार्यक्रमको होस्टका रुपमा आएको हुँ । कुनै रोमियोको रुपमा होइन, म जान सक्दिनँ,’ मैले भनें ।
उसले जबर्जस्ती गरेपछि मैले आफू नजाने तर हिभाको अपार्ट देखाइदिने वाचा गरें । अब ऊ जाँदै थियो, हिभालाई भेट्न, सायद मेरो खबर सुनाउन र हामीलाई मिलाउन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २८, २०७६, ०९:५८:००
‘फेक न्यूज’ बिक्री गर्ने थलो बन्दै सामाजिक सञ्जाल!
भोजराज घिमिरेको ‘अन्तिम प्रश्न’ सार्वजनिक